SP-L08 SOICARE 300ml itswele intloko iinkuni aromatherapy cuke ngomthi ivumba diffuser, China SP-L08 SOICARE 300ml itswele intloko iinkuni ingqolowa aromatherapy cuke ngomthi ivumba ivumba diffuser Abavelisi, abaxhasi, Umzi mveliso - Sunpai Industries Limited
Supply Ukubanako: Iziqwenga eziyi-100000 kwinyanga enye
Inkungu: I-aromatherapy enenkungu epholileyo, isebenza ngokuzolileyo, ilungele ukusetyenziswa ebomini nasemsebenzini. Ngobungakanani be-300ml, inkungu inokuhlala ngaphezulu kweeyure ezili-10. Imveliso yenkungu emalunga ne-60-70ml / h, ilungele isithuba esingu-20-30㎡.
ukhuseleko: Eyilwe ngo-auto-off function, i-diffuser iyakuyeka ukusebenza ngokuzenzekelayo xa amanzi ephela, okanye ixesha liphelile.
UkuKhanya: Esi sisasazi sevumba sinezibane ezi-7 zemibala ye-LED. Kwakhona, umbala ngamnye unokukhanya kunye nokukhetha okuqaqambileyo, oko kuthetha ukuba ukukhanya kunokujikeleza ngemibala eli-14. Okanye, unokuyibeka kumbala omnye ochanekileyo.
Isibalixesha: Ngeqhosha elithi "MIST", unokuseta inkungu esemgangathweni kunye nenkungu eyomeleleyo, kwakhona, unokuseta ixesha lesine lemodeli: 4H, 1H, 3H kwaye iyaqhubeka. Lo msebenzi ukunceda ukuba wenze indawo ezolileyo kunye nenokuphumla.